मेहनत नै मुल मन्त्र हो » होमल्याण्ड खबर
मेहनत नै मुल मन्त्र हो
admin October 14, 17 9:33 am
कर्पोरेट क्षेत्रमा आफ्नो बेग्लै पहिचान बनाउन सफल एक कुशल व्यवस्थापक रोसिद उत्थियान नया नाम भने होइन । यस क्षेत्रमा ३० बर्ष लामो अनुभव हासिल गरेका रोसिद आफ्नो मेहनत र लगनशिलतालाई नै मुल मन्त्र ठान्दछन् । साथै इमान्दारिताले मात्र लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ भन्ने व्याक्तित्व रोसिद उत्थियानसँग होमल्याण्ड मासिकले गरेको कुराकानी:
नेपालको कर्पोरेट क्षेत्रमा तपाइले आफ्नो ब्राण्ड बनाइसक्नु भएको छ । यो उपलब्धी कसरी संभव भयो बताइदिनु हुन्छ कि ?
नेपालमा होस वा अन्य देशमा आफुले पाएको जिम्मेवारीलाई मुल धर्म बनाएर काम गर्ने हो भने स्थापित हुनको लागि त्यत्ति गाह्रो पनि छैन तर अरुले देखे जस्तो सजिलो पनि
छैन । आफुले गर्ने काम प्रति बफादार भयो भने हौसला थपिंदै जान्छ त्यही खुसीले अगाडी बढ्नको लागि मद्दत गर्दछ । सँगसँगै आफु जोडिएको कम्पनी र त्यसले बजारमा ल्याउने वस्तु पनि उत्तिकै गुणस्तरको हुन जरुरी छ ।
कर्पोरेट क्षेत्रमा काम गर्दा कस्ता कस्ता अनुभव संगाल्नु भएको छ ? सेयर गर्नु हुन्छ कि ?
एउटा उद्योग निर्माण गर्नको लागि सम्पूर्ण बिजनेस प्लानदेखि सानो किला का“टीसम्मको व्यवस्थापनको सुक्ष्म सुक्ष्म तहकोे अनुभव लिएको छु । २०–२१ वर्षको अनुभव कुनै
जोक होइन । उद्योग स्थापना ग¥यो उत्पादन हुने बेलामा राज्यदेखि स्थानियवासी, दादागीरी त्यसमाथि लोडसेडिङ्ग सबैलाई मिलाएर लैजानु पर्ने, बेला बेलामा भनाभन् नै पर्दथ्यो । जनतामा शिक्षको अभावले यस्ता समस्या आउने
गर्दछ । अविकसित राष्ट्रमा यस्तो समस्या आइरहन्छ यसलाई सन्तुलन बनाएर लैजानु नै हाम्रो काम हो ।
त्यसो भए तपाईले नेपालमा धेरै उद्योगलाई गति दिनुभयो ?
आरती स्ट्रिबमा ११ वर्ष ऋभ्इ भएर काम गरें जुन उद्योगलाई व्यवस्थित बनाउन ठूलो मेहनत गर्नु प¥यो । त्यस पछि शंकर ग्रुप, जगदम्बा स्टीलमा लगभग साढे ६ वर्ष, २०७३ सालदेखि प्भ्थ्ब्ी न्च्इग्ए मा निर्देशक÷सिइओको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु । तीस वर्षे कार्यकालमा चौघरी ग्रुप, हुलास गोल्छा लगाएत कम्पनीमा काम गरेको ५० वर्ष भन्दा बढी लामो अनुभव संगालेको झै लागेको छ ।
यति धेरै लामो अनुभव संगाल्नु भएको छ, अहिले नेपाली अर्थ बजारलाई कसरी लिनु भएको छ ? तपाईको विश्लेषण के छ ?
नेपालको अर्थबजार अन्य देशको तुलनामा स्थापित बजार भैसकेको छैन । नेपालको अर्थ बजार नेपालको राजनीतिसँग जोडिएको हुनाले जबसम्म राजनीतिक स्थायित्व हुदैन तबसम्म
नेपालको अर्थ व्यवस्था कमजोर नै हुन्छ । यसलाई बलियो बनाउनको लागि दिगो आर्थिक रणनीति र उद्योग कल कारखाना स्थापना गर्नको लागि खुल्ला बजारको रणनीति ल्याउनु पर्ने
देखिन्छ । नेताको लहै लहैमा नीति आउने भएकोले यस्तो समस्या आएको हो । राजनीतिक स्थायित्व भएपछि मात्रै अर्थ व्यवस्था स्थापित हुन्छ, यसमा सरकार, हामी उद्योगी व्यवसायी सबै मिलेर छिटो भन्दा छिटो यसको व्यवस्थापन तिर लाग्नु जरुरी छ ।
प्भ्थ्ब्ी न्च्इग्ए नेपालको एक स्थापित ठुलो औद्योगिक, व्यवसायिक अयmउबलथहो यसका भावी व्यवसायिक योजनाहरु के कस्ता छन् ?
प्भ्थ्ब्ी न्च्इग्ए एक प्रतिष्ठत व्यवसायिक कम्पनी हो । यसले नारायणी स्टील, नारायणी जस्तापाता (सादा र रंगीन) ब्ब्ऋ द्यीइऋप्, श्री कृष्ण पाइप, विकी हार्डवयर, गोर्खा फिड, आरती सिमेन्ट, अस्पताल, इन्सुरेन्स, जस्ता थुप्रै क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । जसले गर्दा नेपालका लाखौं जनताले प्रत्यक्ष लाभ लिएका छन् ।विशेष गरी निर्माण क्षेत्रमा आफ्नो लागानी बढाएका छौं । स्टील जस्तापाता, भ्अय दयिअपक मा हामीले अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर उत्पादन गरेका छौं । स्टीलमा च्यििष्लन ःष्िि जस्ता पातामा ०.१ mm. देखि १.mm. सम्म सादा र रंगीनमा ग्रहाकले रोजे जस्तो कलरमा जापानीज प्रविधियूक्त कलर कोटेड उच्च गुणस्तरको जस्ता पाता नेपालमा नै पहिलोपल्ट ल्याएका छौं । जुन हामीले मात्र नभई देश र जनताले समेत गर्व गर्ने वातावरणमा उत्पादन गर्न लागेका छौं । त्यससँगै भ्अय द्ययिअप को हामीले नेपालको वास्तविक अवस्थालाई ध्यान दिंदै निर्माण क्षेत्रमा नया“ आयाम थप्दै ब्ब्ऋ इन्डष्ट्रीज मार्फत भ्अय द्ययिअप बजारमा ल्याएका छौं । जुन नेपालमा पहिलो पटक आएको हो । जर्मन टेक्नोलोजीबाट निर्माण गरिएको ब्लक नेपाली बजार सुहाउ“दो छ । किन भने नेपाल विश्वकै भुकम्पीय जोखिमको हिसाबले संवेदनशिल मानिएको देश हो त्यसैले यस्ता भुकम्प प्रतिरोधी निर्माण सामग्री उत्पादन गरेर ग्राहकलाई दिनु हाम्रो दायित्व हो ।
प्भ्थ्ब्ी न्च्इग्ए ले व्यवसायिक क्षेत्रमा लगानी बढाउदै गर्दा प्रविधिलाई कसरी ध्यान दिएको छ ?
हामीले लगानी गरेको क्षेत्रमा भनौं स्टीलमा नेपालकै अत्याधुनिक सिधा ःष्िि नया“ जुन अन्य कुनै कम्पनीसँग छैन, जापानीज, जर्मन र अन्य बिकसित मुलुकले विकासर स्थापीत गरेका प्रविधिलाई आत्मसाथ गरेका छौं । त्यसबाट उत्पादन हुने वस्तु उच्च गुणस्तरको हु“दा अन्य कम्पनीको जस्तो उत्पादनमा त्रगबष्तिथ र कष्शभ मा फरक पर्दैन ।
प्भ्थ्ब्ी न्च्इग्ए ले ल्याएका ब्राण्डले बजारमा कसरी प्रतिस्पर्धा गर्दछ ?
मैले अगाडी नै भनिसके कि हाम्रो विश्वास भनेकै गुणस्तरिय उत्पादन हो । बजारमा अहिले धेरै थरिका निर्माण सामग्री पाइन्छ । हामीले क्ष्क्इ र नेपाल गुणस्तर विभागबाट प्रमाणित गरेर सामान बजारमा ल्याउने गर्दछौं । उच्च गुण्स्तरिय सामानले आफैं बजार विस्तार गर्दछ भन्ने विश्वासले हामी अगाडी बढेका छौं । बजार ग्राहकले तय गर्ने हो एकचोटी सामान प्रयोग भएपछि फेरि अर्को ब्राण्डको सामान प्रयोग नगर्ने उद्देश्यले हामीले हाम्रो ब्राण्ड बजारमा ल्याएका छौं । स्टीलमा त्ःत् द्यब्च् देखि अरु छडका ब्राण्ड पनि बजारमा ल्याउने तयारी गरेका छौं । जस्तामा नेपालकै सबैभन्दा अत्याधुनिक प्रविधिबाट सादा र रंगीन जस्ता सात वटै कलरमा आउ“दैछ । भ्अय द्ययिअप नेपालकै पहिलो र ठूलो जर्मन टेक्नोलोजीबाट उत्पादन गरिन्छ । पाइप, न्ष् धबष्चभ जस्ता अन्य ब्राण्डका सामान पनि बजारमा आएका छन् जुन सबैले चिनेका र
प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
अन्तयमा, गुणस्तरीयताको खोजी गरिरहेका उपभोक्ताप्रति केही भन्नुहुन्छ कि ?
बजारमा सामान किन्दा ब्राण्ड मात्र होइन गुणस्तर हेरेर लगानी गर्न सबैलाई अनुरोध गर्दछु । बिशेष गरी आर्किटेक इन्जिनियर, सिभिल इन्जिनियरले दयप बनाउ“दा गुणस्तर हेरेर सामान छनौट गर्ने हो भने ग्राहक र उत्पादनकर्ता पनि सजग हुन्छौं । सबैले यस कुरामा सचेत हुन आवश्यक छ ।
प्राइभेट क्षेत्र आतंकित हुनु पर्दैन, सरकार सहकार्य गर्न तयार छ
सबै सामग्री रमनमै उपलव्ध हुनेछ
एनएमबि बैंकद्धरा सप्तरीका किसानलाई वेमौसमी तरकारीको बीउ वितरण
स्टिलको मागमा कुनै स्थिरता नै छैन
नेपालमा म्यट्रेस प्रयोग कर्ताको संख्या बढ्दो छ ,क्लासिक इन्डस्ट्रिज
‘मधेसमा एमालेले ‘मिस’ गर्‍यो, कांग्रेसका दिन सकिए’